🥇 ▷ Nokia 7.2 wuxuu ka muuqdaa Geekbench muujinaya waxtarkiisa ✅
Nokia 7.2 wuxuu ka muuqdaa Geekbench muujinaya waxtarkiisa
Nokia waxaa lagu qeexay inuu yahay mid ka mid ah shirkadaha casriga ah ee khuraafaadka maanta. Hayb sooca asal ahaan Finnishka waxaa loo muujiyey adduunka inuu yahay mid ka mid ah hormuudyada tikniyoolajiyadda noocan ah, hase yeeshe, natiijooyinka kuma jiraan suuqa hadda. Summada gacanta ku jirta HMD Global ku guuldareystaa in la abuuro faa’iidooyin ku filan oo ay ugu wacan tahay tartan uu kasbaday ku dhawaad ​​dhulka oo dhan qaybta warshadaha casriga ah. Si kastaba ha noqotee, Nokia kama quusayso oo waxay sii wadaysaa inay soo saarto marinnada Terminalka sida kuwa cusub ee la shaandheeyay Nokia 7.2.
Shalay waxaan xaqiijinay in Nokia ay ka soo qeybgali doonto bandhigga IFA 2019 ee ka dhacaya magaalada Berlin markii ugu horeysay oo ay soo bandhigto mowjad cusub oo qalab ah taas oo kor loogu qaadayo natiijooyinka rubuc seddexaad ee sanadka. Hagaag, maanta qaar ka mid ah iftiiminta mid ka mid ah maareeyayaashaas ayaa soo daahay. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo ilaa hadda laga ogyahay waxa cusub Nokia 7.2.
Nokia 7.2: kamarad saddex-laab ah iyo Snapdragon 660
Qeybta dhexe ee cusub ee Nokia ayaa waxaa lagu arkay Geekbench markii ugu horeysay iyadoo natiijooyinku ay yar hoos u dhici doonaan haddaan isbarbar dhigno kuwa kale ee ay xafiiltamaan. Nokia 7.2 wuxuu ku gaari lahaa suuqa leh Sanpdragon 660 sidii saldhig koronto oo ay weheliyaan laba suurtagal 4 iyo 6 GB oo ah dejimaha RAM. Ugu yaraan iyagu waxay ka xaqiijiyeen Gizmochina macluumaad ka socda wakaaladda lafteeda, iyagoo ku daray xawaaraha saldhigga ah 1.85 GHz.
Mabda ‘ahaan, horumarku marka la eego’ Snapdragon 636 ‘ee Nokia 7.1 waa muhiim, si kasta ha noqotee waa in wax laga qabtaa marka loo eego qadka dhexe ee cusub ee isku dhafan Qalabka loo yaqaan ‘Qualcomm 700’ oo ah chipset. Heerka naqshadeynta waxaan ognahay in Nokia 7.2 ay suuqa ku gaari doonaan a kamarad gadaal saddex-gees ah oo ku hoos taal sumadda ZEISS kaas oo lagu qancin karo isticmaaleyaasha aadka u qiimeeya sawirada. Shaashadda waxaa kaliya la ogyahay inay ku dhex dari doonto tikniyoolajiyadda FullHD + oo aysan ku dari doonin akhristaha faraha faraha ku jira gudaha. Maaddaama ay Nokia wali kudareyso qalabka qalabka sawirka sawirka sawirka ka hooseeya ee Nokia 9 PureView, waxayna umuuqataa inay ahaan doonto midka kaliya ee heysta.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadda finnishka ma aysan dooneynin inay xaqiijiso ama beeniso mid ka mid ah macluumaadka la xiriira daadku. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa wax iska cad in Nokia 7.2 ay ku dhici doonto ganaax la’aan ama sharaf ay ku mari doonaan wadooyin aad u tiro badan oo gantaallo wanaagsan. Waan arki doonaa waxa ka dhacaya IFA 2019.